Vaovao - Na eo aza ny ahiahin'i Evergrande, mbola matoky tena i Sika amin'ny fanantenan'i Shina
Fitaovana fanamafisana ny fanoherana
Na eo aza ny ahiahin'i Evergrande, Sika dia mbola manantena ny fanantenana an'i Shina ihany
Zurich (Reuters) -Ny Executive Executive Thomas Hasler dia nilaza tamin'ny Alakamisy fa afaka mandresy ny fiakaran'ny vidim-bokatra manerantany i Sika ary ny tsy fahatokisana mifandraika amin'ny olan'ny trosa China Evergrande mpamorona mba hahatratrarana ny tanjony tamin'ny 2021.
Taorian'ny fiankinan-doha tamin'ny herintaona dia niteraka fihenan'ny tetik'asa fananganana, nanangana ny 13% -17% amin'ity taona ity ny mpamokatra akora simika any Suisse.
Manantena ihany koa ny orinasa fa hahatratra 15% ny tombam-bidin'ny asa amin'ny taona voalohany amin'ity taona ity, manamafy ny torolalana nomeny tamin'ny volana Jolay.
Nandray an'i Sika tamin'ny volana Mey i Hasler ary nilaza fa na eo aza ny fisalasalana manodidina an'i China Evergrande, dia mbola manana fanantenana ihany izy momba an'i Shina.
“Betsaka ny vinavina, saingy mora kokoa ny fikambananay sinoa. Kely ihany ny fihoaram-pefy, ”hoy i Hasler tamin'ny Reuters tamin'ny Andron'ny mpampiasa vola tao Zurich.
Nilaza izy fa ny vokatr'i Sika dia ampiasaina amin'ny fanamafisana sy fanamafisana ny akora fananganana. Raha ampitahaina amin'ny tsena marobe toa ny toeram-ponenana ampiasain'ny orinasa sinoa indrindra, ny Sika dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny tetikasa avo lenta toy ny tetezana, seranan-tsambo ary tonelina.
"Ny sandanay dia raha manangana toby famokarana angovo nokleary ianao na miankina amin'ny haitao avo lenta, dia mila fahatokisana izy ireo avy eo," hoy ny tompon'andraikitra 56 taona.
"Hamafisina sy hainganana ity karazana tranobe ity," hoy i Hasler nanampy. “Ny paikadim-pitomboantsika any Sina dia tena mahay mandanjalanja; tanjonay ny fampandrosoana any Shina toy ny any amin'ny faritra hafa. ”
Nanampy i Hasler fa ny varotra Sika isan-taona any Shina dia mitentina 10% eo ho eo isan-taona ny varotra isan-taona, ary io fizarana io dia “mety hitombo kely”, na dia tsy hampiakatra avo roa heny ny tanjon'ity orinasa ity aza.
Sika dia nanamafy ny tanjony tamin'ny 2021, "na eo aza ny fanamby amin'ny fampiroboroboana ny vidin'ny akora ary ny famerana ny rojom-pamokarana."
Ohatra, noho ireo mpamatsy polymer izay miaina olana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana manontolo, dia manantena i Sika fa hitombo 4% amin'ity taona ity ny vidin'ny akora.
Ny Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola, Adrian Widmer, dia nilaza fa amin'ity hetsika ity dia hamaly ny fiakaran'ny vidin'ny orinasa amin'ny telovolana fahefatra sy amin'ny fiandohan'ny taona ho avy.
Fotoana fandefasana: Oktobra-08-2021
Nickel Wire, Bayonet Heater, Open Coil Heater, Bayonet Heating Heating, Ireo singa fanafanana, Wire fanoherana,